Canthaxanthin Cas 514-78-3 Qiimaha, Alaab-qeybiye ka socda Bolise
[Magacyada kiimikada] β-carotene-4,4'-dione; 4,4'- diketo-β-carotene
[CAS MAYA. ] 514-78-3
[Foomka Molecular] C40H52O2
[Miisaanka Molecular] 564.84
[U dheelitirnaan] Qaybaha yaryar ee casaanka madow
Ku saabsan Canthaxanthin
Astaxanthin waxaa soo saaray dhir yar yar oo microscopic ah: micro-alga Haematococcus pluvialis. Haematococcus algae waxay ka koobnaan kartaa ilaa 30 g oo ah astaxanthin halkii kiilo ee algae qalalan. Micro-algaani waxaa cuna xayawaanada bada oo ay ku jiraan kaluunka, xamaariga, xamaasadaha iyo aargoosatada. Astaxanthin ayaa mas'uul ka ah midabka guduudan ee xayawaanadan. Ilo kale oo ganacsi ayaa ka yimid khamiirka midabka leh ee midabka leh Xanthophyllomyces dendrorhous.